Indlela yokukhipha ibhasikidi lezinwele kumbuthano
Izitayela zezinwele ezakhiwe kusuka emabhokisini, zihlale zijwayele iminyaka embalwa edlule. Kuze kube manje, kusetshenziswe izinhlobo eziningi zokweluka okunjalo. Ukubukeka okubukeka kakhulu okubukeka-ibhasikidi kumbuthano. Indlela yokugqoka i-hairstyle enjalo, sizoxoxa ngale ndaba.
Ubani ongafanelanga izinwele?
Ngaphambi kokuba uhlole ukuthi ungayifaka kanjani ibhasikidi lezinwele, isithombe esinikezwa kulokhu okubalulekile, udinga ukuthola ukuthi ngabe lekhanda lezinwele lilingani uhlobo lokubukeka.
Ngokushesha kufanele kuqaphele ukuthi ukusebenzisa umqondo akunconywa amantombazane ngobuso obunzima, njengoba lokhu kuvula izinwele kuvula. Le hairstyle ngeke isebenze kulabo abanezici ezincane nezincane zokubukeka.
Ukuzama ukuthola indlela yokukhipha ibhasikidi, kufanelekile ukuqhathanisa izinzuzo nezingozi. Indlela yokuhlolisisa ukubukeka komuntu siqu izokugwema ukugxila ekunakekeleni kokungaphumeleli kwayo.
Yini engathatha ukudala i-hairstyle?
Ukuqaliswa kwesakhiwo esiyinkimbinkimbi kudinga lonke lamathuluzi namathuluzi asizayo. Ukuze ubeke ibhasikidi ekhanda lakho, uzodinga okulandelayo:
Ukushaya izinwele ngezingubo ezithambile. Uma udala i-hairstyle, ukusetshenziswa kwemikhiqizo enamazinyo ensimbi akukhuthazwa, ngoba isidingo sokuqhathaniswa kwezinwele isikhathi eside ekulungiseleleni umsebenzi kungaholela ekulimaleni kwamakhekhe kanye nesikhumba.
Hlanganisa nethiphu elincane kanye namazinyo amancane. Ukuba khona kwale thuluzi kuzokwenza kube lula ukwenza ukwahlukana okulinganayo, ukwehlukaniswa kwezinsimbi ezincane.
Iqoqo lezinwele zezinwele, izinwele zezinwele, ama-rubber ama-diameter ahlukahlukene. Ukusetshenziswa kwezesekeli ezinjalo kuzovula ithuba lokunamathiselwe okulondekile kwezakhi zezinwele.
Kusho izinwele ze-styling (ama-gel, ama-varnishes, ama-mousses). Ukusetshenziswa kwalezi zinto kuvimbela izinwele ukuba zilahleke, zigcine ifomu layo langempela isikhathi eside. Ukwengeza, ngenxa yokucubungula kwe-locks nge-stowage, lapho ubuchopho bukhishwa emigqeni, kahle, i-curls ekhangayo yenziwa.
Ukugqoka izinwele zokugqoka izinwele kuyenza kube lula ukwenza umsebenzi, kwenze kube lula ukulungisa izinsimbi ngaphandle kwezinkinga ezingadingekile, ezivimbela ukusebenza komsebenzi. Isixazululo esingcono kunazo zonke lapha kuzoba ama-crabs amancane epulasitiki, ongayithengisa ngamanani angenangqondo lapho kudayiswa khona izimfanelo zezimonyo.
Isibuko esikhulu - esibukisisa ngenqubo yokwenza i-hairstyle, inkosi ithola ithuba lokulungisa amaphutha ngqo kwinqubo yokwenza umsebenzi. Ngaphezu kwalokho, isibuko singumsizi omuhle kakhulu, uma intombazane inesithakazelo sokukhipha ibhasikidi lezinwele, futhi ufuna ukufunda ukuthi ungayenza kanjani wena.
Ungayifaka kanjani isikhwama sezinwele kwengane?
Ukudala i-hairdo ngendlela yebhasikidi kunezici zayo ezikhethekile lapho usebenza emakhanda amantombazane namantombazane asekhulile esikoleni. Ama-braids wokugcina yizinsimbi eziqine kakhulu zobunjwa obufanayo obusekela izingqimba ezikwazi ukuwa ebusweni. Lokhu kugwema ukungakhululeki okungadingekile ngesikhathi sokutadisha nokunyakaza komzimba okusebenzayo.
Isixazululo sokuqala ngumhlobiso webhasikidi, owenziwe izinwele zentombazanyana encane, nazo zonke izinhlobonhlobo zamakhanda ezinwele ezinemibala, ama-band elastic and other qualities.
I-pigtail elula ibhasikidi. Ungayifaka kanjani?
Ukwenza ibhasikidi elilula elizungeze ikhanda, izinwele zezinwele kuqala. Izinwele zihlukaniswe izingxenye ezine. Ukusebenzisa ikhefu elincanyana, kuhlukaniswa isithwathwa esiphambanweni.
I-weave iqala kusukela phansi kwekhanda. Okokuqala, i-spikelet ejwayelekile eyenziwa, equkethe izintambo ezintathu, ubuchopho bukhishwa kancane kancane ngenxa yokuphambana kwezinsimbi ezifanayo zesayizi efanayo. Uma nje ifinyelela ezingeni lezindlebe, izinwele zihlanjululwa nge-varnish, ama-curls amakhulu adluliselwa, okuvumela isidalwa ukuba sithole ivolumu.
Ngokusho komthetho ongenhla, ukusika kuyenziwa ngaphesheya kwekhanda. Kumele kuqashelwe ukuthi umngcele ophansi we-braid kufanele ube mkhulu kakhulu kunaphezulu. Lokhu kuzokwenza ubhasikidi we-invoyisi ngemingcele ehlukanisiwe ngokucacile.
Ukugqoka ngemuva kwekhanda kuphelile. Ithimba lihlelwe ngebhande elincane le-rubber. Izinwele eziphumayo zihlelwe izinto ezingabonakali futhi zifihliwe ngobuningi bezinwele.
Uma ulungiselela ukwenza lo msebenzi, izinwele zihlotshaniswa ngokucophelela ngebhashishi elithambile, emva kwalokho ama-curls asetshenziselwa i-gel ukuze i-styling. Amafomu amakhulu omsila ku-vertex. Ngesikhathi esifanayo, cishe izinwele ezifanayo kufanele zihlale ngaphansi kwekhanda eliphansi. Umsila uhlanganiswe nebhola elincane elincane le-rubber.
Ungayifaka kanjani ibhasikidi kusukela enkabeni? Ukuze uqale, i-braid ende yesiFulentshi yenziwa. Ngemuva kwezinguquko eziningana ezungeze ikhanda, ukuhlunga emsila oyinhloko kuphuma kuwo. Ikhefu ngalinye ngesikhathi sokukhwela ubhontshisi kudinga ukwengezwa kwezinwele zamahhala ezivela ezindaweni ezinhlangothini.
Ekupheleni, ukuphela kwesiphakamiso kuhlanganiswe nebhande elincane le-rubber. Ikhanda lekhanda lifakwe nge-lacquer nomphumela wokulungiswa okuqinile. Ngaphezu kwalokho, ifomu lingaqondiswa ngokusebenzisa izikopelo.
Uma udala i-hairdo, izinwele ezivela emsila kufanele zihanjiswe ngokulinganayo. Uma kungenjalo, kungenzeka ukuthi akwanele ukugcwalisa ngempumelelo ukubunjwa.
Ibhasiki enengxenye ephakathi
Ungayifaka kanjani ibhasikidi ngokuhlukanisa? Lezi zinsuku kumele zibe njengezitezi futhi zingatholakala phakathi kwekhanda. Ngaphandle kwalokho, izinwele zizobukeka zihlambalaza.
Ngemuva kokuhlukanisa izinwele zibe izingxenye ezimbili ezilinganayo, amabhande avamile aphethwe ngamacu amathathu aphethwe ohlangothini ngalunye. Kuzo zonke zazo, ukwehla izinsika ezivela engxenyeni engezansi yekhanda kuthathwa. Ukuze unikeze ivolumu yokwakheka eseqediwe, kancane kancane welula ama-curls ohlangothini.
Ibhasiki ngokuqoqa izinhlangothi zombili zomkhonto
Ukuze uqonde ukuthi ungagcwalisa kanjani ibhasikidi ngokukhethwa kwezingqimba ezingavamile ezinhlangothini zombili, kumele uqale ukuqoqa izinwele esifundeni sekhanda. Lapha, izinwele zilungiswe nge-band eqinile.
Esikhathini esivela ebusweni kubhekwa ubuchopho obukhulu, lapho izinsika zihlangene khona ngezansi, bese zivela phezulu. Kulesi simo, kubalulekile ukubala ubude bezinwele ngendlela yokuthi izinwele zanele ukuqonda ikhanda kulo lonke uhlangothi. Ngokushesha lapho ama-curls wamahhala wokuxolisa ku-braid azophela, akwanele ukuwumbumba kuze kube sekupheleni, ukulungiswa ngawo abangabonakali.
Izinwele ezincane zezinwele
Abanikazi bezingqimba ezide kakhulu akufanele bakucasuke, ngoba ikhanda elenziwe ngebhasikizi lingenziwa ezinwele ezinjalo. Ukuqhubeka komsebenzi lapha kanje:
Okokuqala, izinwele zihlotshiswe ngokucophelela ngebhayisikili noma ngesihlava esinamazinyo amakhulu.
Ukuhlukanisa iziyingi kwenzelwa ekuqondeni kusuka ebunzini kuze kufike emilenzeni. Isikhungo sekhanda sinqunywe, lapho, eqinisweni, ukugqoka kuqala.
I-spikelet evamile eyenziwa, okuyizintambo ezivela engxenyeni yangaphandle yekhanda lokuzwa ziyathathwa. Ukweqa kudalwe kumbuthano. Ephakathi, umsila omncane usungulwe ngempela, ongabhalwa ngesimo segwala noma efihliwe ngaphansi kwezingqimba.
Ekugcineni, izinwele zifakwe nge-varnish, zihlotshiswe nganoma yiziphi izesekeli ngokuthanda.
Ukufana okunjalo kuzokwenza kube lula ukuqonda kahle ukuthi ungafunda kanjani ukukhipha isisindo sezinwele kwengane. Ezinganeni, isixazululo esinikezwe sibukeka sinengqondo, ngoba izingane eziningi ezinganeni zasenkulisa ayinaso ikhanda elide, elilukhuni.
Izinwele zangaphambi kokugeza zigcwele. I-strand encane ihlukanisa nethempeli, elihlukaniswe izingxenye ezimbili ezilinganayo. I-curl engakwesokudla ikhonjiswe ngakwesobunxele. Lapha wanezela i-strand encane yobuningi bezinwele. Lezi zinsuku zipheqa ezungeze ikhefu elifanele ngendlela ehamba ngayo. Ngokusho kwalesi simiso, lo mhlaba ukhonjiswe kuwo wonke umjikelezo wekhanda.
Ngokushesha nje lapho ukuqala kwe-weaving kuhlangana nokuphela kwayo, izinwele ezisele zifihlekile ngaphansi kwe-harness. Ephakathi kwekhanda, ungahlobisa ngezinsiza ezinkulu, isibonelo, ngesimo sembali. Ekupheleni komsebenzi, izinwele kufanele zifafazwe nge-varnish, okuzobe kulungiswa ngokwengeziwe.
Kunamaphuzu ambalwa abalulekile, egxile kuyo, ikuvumela ukuthi wenze ikhanda lekhanda elinembile kakhulu, elikhangayo:
Uma intombazane inama-curly curly, ngaphambi kokuba uthathe isinqumo sokuzibophezela, ungadinga ukuyiqondisa nge-ironing kanye nekhefu ngokucophelela.
Yenza izinwele zakho ziqondise ethempelini. Kuphela kulesi simo, ukuphela kwezinsizakalo ze-braids kuzofihlwa ekuhloleni amehlo ngemuva kwekhanda.
Amantombazane anezinwele ezinhle, kunconywa ukuba ahlanganise izintambo emhlabathini ngaphambi kokuba enze umsebenzi. Lesi sixazululo sizokwenza ukuthi ibhasikidi libe namandla kakhulu.
Njengoba kungabonakala, kunezinhlobonhlobo eziningi zokugqoka izinsimbi ngendlela yebhasikidi. Ukudala ukwakheka kwangempela, kufanelekile izikhathi eziningana ukuzama, ngokusekelwe ezimisweni ezingenhla. Uma okokuqala izinwele zingasebenzi, ungadikibali. Phela, ukuqonda inqubo ethile yokugqoka kwanele kuphela ukuqhuba izikhathi eziningana.
Ngokuvamile, i-hairdress ngesimo sebhasiki iyisixazululo jikelele sokubunjwa kwezithombe ezihlukahlukene zansuku zonke nemikhosi. With styling eklanyelwe ngokucophelela akuyona amahloni ukuphuma kubantu, avele ehhovisi, vakashela yokudlela. Lapho ulungiselela i-hairstyle ngomcimbi omangalisayo, inketho enhle kakhulu kumntombazane omdala kuyoba yikhasikidi enezinwele ezinjengama-curls awela, kanye namantombazane amancane - anemicibisholo ekhanyayo nama-hairpins ambala.
"Aibga" (3 * Ihhotela), Krasnaya Polyana, Sochi: izibuyekezo, izithombe
Strollers "rant": imicabango yabantu mayelana models athandwayo
Top push-inkinobho omakhalekhukhwini. Top 10